Nanangana ny foibeny any Afovoany Atsinanana ny Skype · Global Voices teny Malagasy
Nanangana ny foibeny any Afovoany Atsinanana ny Skype
Voadika ny 28 Marsa 2019 4:01 GMT
(Marihina fa tamin'ny volana Aogositra 2010 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Ny 28 Jona 2010, nanambara tao amin'ny bilaoginy ny fanokafana ny foiben'ny orinasa voalohany any Afovoany Atsinanana sy any Afrika izay hapetraka ao Manama, renivohitr'i Bahrain ny Skype. Rouzbeh Pasha, Talen'ny Fampandrosoana ny Raharaham-barotra ho an'ny faritra Afovoany Atsinanana, no hitantana ny fanodinana ny orinasa any amin'ny faritra. Navoaka nandritra valan-dresaka an-gazety niarahana tamin'ny Skype sy ny Biraon'ny Fampandrosoana ara-Toekarena ao Bahrain (EDB) ity fanambarana ity .
Nilaza ny Tale Jeneralin'ny Skype fa “ahitana ny iray amin'ireo tontolom-pampandrosoana matanjaka indrindra i Bahrain hanohana sy handrisika ny fanavaozana – amin'ny fisian'ny talenta eo an-toerana sy ny paikadin'ny fampandrosoana ara-toekarena izay andrandraina hanampy ny fihariana sy hampivelatra ny fijoroana ao amin'ny faritra.” Nampiany fa “manana mponina tanora manampahaizana amin'ny teknolojia ny any Afovoany Atsinanana sy Afrika ary mino izy ireo fa handray andraikitra lehibe i Bahrain amin'ny fanaovana ny Skype ho malaza kokoa any amin'ny faritra.”
Anisan'ny tanjon'ny paikady ara-toekarena nasionaly ao Bahrain antsoina hoe ‘Vision 2030′ izay ahitana ny rafitry ny fifandraisandavitra sy ny serasera ny fanambarana.
Raha ny marina, mitarika i Bahrain ao amin'ny faritra eo amin'ny Teknolojian'ny Fampahalalam-baovao amin'ny ankapobeny sy ny Aterineto indrindra indrindra. Mahatratra hatrany amin'ny 88% ny tahan'ny fidirana amin'ny aterineto any amin'ny Emira Arabo Mitambatra izay ambony kokoa noho ny tahan'ny fidirana amin'ny aterineto any Israely, izay 72% eo ho eo. Ankoatra izay, loha-laharana amin'ny firenena any Afovoany Atsinanana i Bahrain araka ny tatitry ny Firenena Mikambana tamin'ny taona 2010 momba ny fahavononana hampiasa ny e-governemanta.